RASMI: Man City Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Ferran Torres Iyo Weerarkii Hore Ee City Oo La Sii Kordhiyay - Gool24.Net
RASMI: Man City Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Ferran Torres Iyo Weerarkii Hore Ee City Oo La Sii Kordhiyay
Manchester City ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday heshiiska ay kula soo wareegtay xidigi kooxda Valencia ee Ferran Torres wuxuuna Pep Guardiola sameeyay saxiix muhiim u noqon doona kooxdiisa City.
Manchester City ayaa 23 milyan gini ka soo bixisay xidiga reer Spain ee Ferran Torres wuxuuna noqonayaa mid badal looga dhigi doono Leroy Sane oo dhawaan 45 milyan gini ugu wareegay kooxda Bayern Munich.
Markii uu qalinka ku duugay heshiis shan sanadood uu Manchester City ku joogi doono waxa uu Ferran Torres ka hadlay dareenkiisa isaga oo farxad wayn ka muujiyay in uu City ku soo biiray.
Ferran Torres oo dareenkiisa ka hadlaya ayaa yidhi: “Anigu waxaan ku faraxsanahay in aan City ku soo biirayo.Ciyaartoy kastaaba waxa uu doonayaa in uu ku lug yeesho koox weerar ah, Manchester City waa mid ka mid ah kooxaha ugu weerarsan kubbada cagta aduunka”.
Ferran Torres oo ka hadlaya sababta uu Man City kaga doortay kooxihii kale ee doonayay ayaa yidhi: “Pep ayaa igu dhi: “Pep waxa uu xaqiiqdii dhiiro galiyaa furnaanshaha, hanaanka weerarka ah kaas oo aan jecelahay. Isagu waa tababare leh rekoodh la soo cadeeyay in uu ciyaartoyda ku horumariyo. in aan arko isaga oo horumarkayga eegaya waa riyo”.
Ferran Torres ayaa ka hadlay guulihii Man City iyo waliba waxa uu doonayo in uu sameeyo wuxuuna yidhi: “City waxay tobankii sanadood ee ugu danbeeyay ku soo guulaysatay koobab aad u badan, waxaan rajaynayaa in aan door ka ciyaari karo sii joogtaynta guushaas”.
Ferran Torres oo 20 sano jir ah ayaa si toos ah u xidhan doona kabihii Leroy Sane wuxuuna noqon doonaa badalka xidiga reer Germany oo Bayern Munich ku biiray kadib markii uu diiday in uu sii joogo Etihad Stadium.
Ferran Torres waxa uu noqonayaa saxiixii ugu horeeyay ee muhiim ah ee uu Guardiola suuqan sameeyay laakiin waxaa la filayaa in uu hordhac u yahay saxiixo badan oo ay City xagaagan samaynayso.
Kadib xili ciyaareed ay Man City awoodi kari wayday in ay ka soo agdhawaato Liverpool waxa uu Guardiola wadaa qorshe uu dib u habayn kale ugu samaynayo Etihad Stadium wuxuuna Torres ka mid noqonayaa qorshaha suuqa ee Etihad Stadium ay meesha ku sii qorteen.
Ferran Torres waxa uu ku biirayaa ciyaartoydii weerarka ee uu Guardiola haystay oo kala ahaa Sergio Aguero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden iyo xidigaha kale ee boosaska weerarka ka ciyaari kara, waana talaabo kale oo uu ku muujiyay Guardiola in uu weerarka kooxdiisa ka dhigayo mid aan ciyaartoy gaar ah ku tiirsanayn.